रक्सी पिएपछि मान्छे किन अंग्रेजी बोल्छन् ? यस्तो छ कारण – Democracy Nepal
24 seconds ago demo user
सो समयमा आफ्नो मौलिक भाषा बोल्नुको साथै केही व्यक्तिहरुले काम पनि गर्न सक्छन् भने कसैले सामान्य अवस्थामा रहन पनि सक्दैनन् । नाच्न र गीत गाउँन लाग्दा लड्न पनि सक्छन् । हामीले कसैको सहयता बिना पनि आफ्नो आत्मबल बढाउन सक्छौ ।त्यसैले रक्सी स्वास्थ्यको लागि हानिकारक हो र यसलाई खान आजैबाट छोडौँ ।
Previous बझाङमा बर्सेनि बढ्दै आत्महत्याका घटना : महिलाकाे सङ्ख्या धेरै
बझाङमा बर्सेनि बढ्दै आत्महत्याका घटना : महिलाकाे सङ्ख्या धेरै
41 mins ago demo user
कठै न्याय हराएको मेरो देश .!
51 mins ago rahul panjiyar
56 mins ago demo user
9 mins ago rahul panjiyar